Epidemic kuchengetedza ruzivo rwevamwe vanhu vatove kana kuti vachazoenda kunoshanda, mukubuda kwazvino kunofanira kuita? 1. Maitiro ekupfeka zvakanaka mashereni ekuvhiya ari munzira yekuenda kubasa.Isare kutora zvifambiso zvevoruzhinji, zvinokurudzirwa kufamba, bhasikoro kana kutora mota yakazvimiririra, bhazi rekuvhara kuenda kubasa.Kana iwe uchizoshandisa zvifambiso zvevoruzhinji, iva nechokwadi chekupfeka mask nguva dzese.Yedza kudzivirira kubata zvinhu mubhazi.
2, maitiro ekupinda muchivako usati wapinda muchivako chehofisi unogamuchira bvunzo yekushisa, tembiricha yakajairika inogona kupinda muchivako, uye kugeza maoko kuenda kuimba yekugezera.Kana kupisa kwemuviri kunodarika 37.2 ℃, ndapota usapinda muchivako chebasa. , uye enda kumba kwekutarisa uye zorora. Kana zvichidiwa, enda kuchipatara kunorapwa.
3. Chengetedza nzvimbo yehofisi yakachena uye yakashambidzika kwemaminitsi makumi maviri kusvika makumi matatu katatu pazuva. Ndokumbira unzwe kudziya kana uchikwenya.Keep chinhambwe chinopfuura 1 metres pakati pevanhu, uye pfeka masks kana vanhu vazhinji vanoshanda.Keep kugeza maoko uye kunwa mvura kazhinji.Both mativi ekugamuchira anopfeka masks.
4. Zvinokurudzirwa kupfeka mask uye kugeza maoko usati wapinda mukamuri yekusangana.Iye nguva yekusangana kwevashandi inopfuura 1 metres.Deredza kusangana kwemisangano, dzora nguva yemisangano, nguva yemusangano yakareba, vhura hwindo rewindows .Iyo nzvimbo nenhumbi zvinofanirwa kuiswa disinsa mushure memusangano .Zvese zvinogadziriswa zvinokurudzirwa kuuraya hutachiona nekunyudza mumvura inovira.
5. Kudya kuimba inotora chikafu chakasiyana kuti udzivise vashandi vakawandisa.Iresitorendi yacho inochengetwa kamwe chete pazuva, uye tafura yekudyira nemacheya achibviswa mishonga mushure mekushandisa.Tableware inofanirwa kuiswa pasteurized.Keep imba yekushandira yakachena uye yakaoma. Usasanganisa chikafu chakabikwa nechikafu chakabikwa. Regedza nyama mbishi.Suggest lutrition match match, zvishoma mafuta mashoma emunyu light flavour.6. Pfeka bhegi rinoraswa rekuvhiya kana uchibuda munzira uchibva kubasa. Geza maoko uye ubaye hutachiona mushure mekubvisa maski kumba.Sevha runhare nemakiyi ane hutete husina tsvina kana 75% doro.Kutora mukamuri mhepo yakachena uye yakachena, dzivirira vanhu vazhinji kuti vaungane.
7. Buda kunze uye upfeke masks kudzivirira dense mahinji.Keep chinhambwe chinopfuura 1 metres kubva kuvanhu uye dzivisa kugara munzvimbo dzeveruzhinji kwenguva yakareba.
8. Rumbidza zviitiko zvakanaka uye zvine mwero panguva yebasa uye zorora kuti uve noutano hwakanaka.
9. Nzvimbo dzeruzhinji dzinofanira kubviswa disinbhenekeri zuva rega rega kuenda kune foyer, corridge, kamuri yekusangana, lifti, masitepisi, chimbuzi nezvimwe zvinowanikwa munzvimbo dzinowanikwa veruzhinji, uye huturu hwekuparadza huturu huchashandiswa sezvazvinogona. kusanganisa.
10. Zvinokurudzirwa kupukuta mukati nekumusuwo mubato wemotokari yakakosha parwendo rweofficial ne 75% doro kamwe chete pazuva.Tora bhazi rekuvharira kupfeka mask, zvinokurudzirwa kuti bhazi rekuvharira mukushandiswa kwe 75% doro mukati memotokari nemusuwo gonhi rinopukuta disinfection.
11, logistics cant gumi yekutenga vashandi kana vanopihwa zvinhu vanofanirwa kupfeka masiki neanorasa magurovhosi, kudzivirira kusangana chaiko nenyama uye huku zvinhu zvinogadzirwa, yekugeza maoko nguva nenguva disinfection mushure mekuchengetedza magurukota.Cleaning vashandi vanofanirwa kupfeka magirovhosi erabha rinoshandiswa kana vachinge vageza maoko avo mushure mekushanda.Security. vashandi vanofanirwa kupfeka mamask kuti vashande, uye nekunyatso bvunza uye kunyoresa chimiro chevashandi vekunze, vakawana zvisina kujairika mamiriro ezvinhu nguva.
12, kushanyirwa kwepamutemo kuti ungaita sei unofanirwa kupfeka mask.Nguva isati yapinda muchivako chehofisi, tora tembiricha yekuongorora uye unotanga nhoroondo yekuratidzira hubei uye zviratidzo zvakadai sefivha, kukosora uye dyspnea.Pasipo pemamiriro ari pamusoro, uye muviri kupisa mune 37.2 ° mamiriro akajairwa, anogona kupinda bhizinesi rekuvaka.
Shamba maoko usati wapfuura uye wapfuura mapepa mapepa, uye pfeka mask kana uchipfuura magwaro.14, kurira runhare, maitiro ekuita akakurudzira landline nhare 75% doro rinopukuta kaviri pazuva, kana rikashandiswa kazhinji rinogona kuwedzerwa nenzira kwayo.